योगेशको गम्भीर प्रश्न, किन ७ जनालाई हेलिकोप्टरमा चढाईयो ? (भिडियोमा) | Kendrabindu Nepal Online News
योगेशको गम्भीर प्रश्न, किन ७ जनालाई हेलिकोप्टरमा चढाईयो ? (भिडियोमा)
१७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार २०:१८
काठमाडौं । बुधबार ताप्लेजुङको सिस्नेभिरमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनाको यर्थात कारण खुल्न सकेको छैन् । अत्यधिक मात्रा हिमपात हुँदा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको अनुमान गरिएको छ ।
अर्को कारण ६ जना बोक्ने सक्ने क्षमताको हेलिकोप्टरमा ७ जना चढाईदा पनि दुर्घटना भएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । दुर्घटनामा परी पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको मृत्यु भएपछि हेलिकोप्टर सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।
यसैमा सत्तारुढ दल नेकपा नेता तथा स्वर्गीय मन्त्री अधिकारीका हितैसी मित्र योगेश भट्टराईले पनि यसबारे प्रश्न उठाएका छन् । उनले ६ जना चढ्ने क्षमता भएको हेलिकोप्टरमा किन ७ जना चढाईयो भन्दैं प्रश्न गरेका छन् । दुर्घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले एक छानविन समिति समेत गरेको छ ।
yogesh bhattarai, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, याेगेश भट्टराइ, रवीन्द्र अधिकारी
Prevभिडियोमा हेर्नुहोस ५ जनाको पशुपति आर्यघाटमा यसरी गरियो दाहसंस्कार
पाकिस्तानद्वारा रिहा गरिएका पाइटललाई भारतमा भव्य स्वागतNext
पर्यटनमन्त्री भट्टराई र पर्यटन सम्बद्ध प्रमुखहरूबीच १ घन्टा १० मिनेट ‘भिडियो कन्फरेन्स’
आज रवीन्द्र अधिकारीको पहिलो पुण्यतिथि
रवीन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टरको अगाडि सिटमै ३ जना सवार (भिडियोसहित)